लक्ष्मणलाल कर्णको चेतावनी : हामी बाटोमा पुग्दा देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
लक्ष्मणलाल कर्णको चेतावनी : हामी बाटोमा पुग्दा देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला !
जेठ ३० गते, २०७६ - १२:३५
काठमाडौं । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मधेशीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै रोस प्रकट गरेका छन् । उनले मधेशीको मुद्दालाई सुनुवाई नगरेर सरकारले फेरि सडकमा फर्कने अवस्था बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको वैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘हामी संसद बाहिर जाँदाको अवस्था याद होला तपाईंलाई ? यहि ठाउँबाट हामी गएका हौं बाटोमा । फेरि हामी बाटोमा गयौं भने यो देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला !’
संसदमा बोल्दै कर्णले संविधान संशोधन गर्छु भनेका जति सबैले बिर्सिएको भन्दै सम्झाउन उपस्थित भएको बताए । ‘संविधान संशोधनको पक्षमा आएका पार्टीमध्ये आज सत्तामा पनि छन् विपक्षीमा पनि छन् । तर संविधान संशोधन बिर्सिसकेका छन् । म सम्झाउनको लागि उपस्थित भएको छु ।’
उनले लोकसेवाले संसदको निर्देशन कुन आधारमा मान्दिन भन्न मिल्छ भनि प्रश्न गरे । ‘संसदले निर्देशन जारी गर्ने सरकारले नमान्ने, सम्बन्धित मन्त्रीले पनि नमान्ने, लोकसेवा आयोगले पनि नमान्ने भनेको छ । यो लोकसेवा आयोगमाथि अर्को कुनै संस्था छ कि यहि संसद हो ? संसदले निगरानी गर्ने बाहेक अन्य कुनै संस्था बनेको छ ?’
कर्णले संसदको उपहास सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘संसदको निर्देशन सरकारले नमान्ने । संसदीय समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगले नमान्ने हो भने त यो भन्दा ठूलो उपहास संसदको हुँदैन् । संसदको गरिमा कायम होस् ।’
जेठ ३० गते, २०७६ - १२:३५ मा प्रकाशित